हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: January 2010
तेश्रो विश्वका धेरै गरीव देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि विकासले गरिबी झन बढाएको छ । जब बहुदल आयो, प्रजातन्त्रले यति थोरै उपलब्धि देला भन्ने कमैलाई आशंका थियो । नेपालमा भ्रष्टाचार र नातावादको लामो संस्थागत परम्परा रहेछ । कम्ती मा पनि राणाकाल देखि नै राजनीतिक मुलधार भ्रष्ट रहेछ ।
बिदेशीहरुको लागि नेपाल सन् १९५१ सम्म त बन्द नै थियो र तर सन् १९९५ मा आईपुग्दासम्म लाखौं बिदेशीहरुसंगै ठुलो बिदेशी अनुदान पनि विकास गर्न भनेर आएको रहेछ । म पनि यो प्रक्रिया बिगत पच्चिस बर्ष भन्दा बढी समयदेखि नजिकबाट हेरिरहेको छु । मैले हेर्दा विकासको पश्चिम युरोपेली र उत्तर अमेरिकी ढाँचा नेपालको लागि झन शोषणकारी भएको छ, तर यो कुरालाई आकर्षक नाराहरुले लुकाईएको रहेछ ।
धेरैजसो बिदेशी सहयोगसंगै शर्तहरु पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । प्रमुख शर्तमा दाता राष्टबाटै वस्तु र सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कामको लागि नेपालीहरु आफै गर्न सक्छन, धेरै जसो रकम त बिदेशीहरुकै तलबमा मात्रै जान्छ । धेरै कम योजनाले विपन्नलाई फाईदा गरेको छ । भनिन्छ कि विकास अनुदानको १० प्रतिशत मात्र विपन्न वर्गमा पुगेको हुन्छ । धेरैजसो त चुहिएर नव धनाढ्यहरुको खल्तीमा पुगेको हुन्छ । यो कुरा अमेरिकी सहरहरु भन्दा पनि महँगो काठमाण्डुको घरजग्गाको मुल्यले प्रमाणित गर्छ, जहाँ मध्यमबर्गले पनि अकुत सम्पति कमाएको देखिन्छ ।
अन्तराष्टिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले रिन दिनेवेला संरचनासंग परिवर्तनको शर्त राख्छन् । तेस्तो परिवर्तनले नेपाली मुद्रालाई झनै कमजोर बनाएको छ । बिदेशीहरुले आफ्नो देशको मुद्राको तुलनामा नेपालमा राम्रो मुल्य पाउँछन्, जबकि नेपालीहरुले झनै दुख पाएका छन् ।
नेपालको सबैभन्दा प्रमुख आर्थिक श्रोत ठुला नदीहरुमा भएका जलबिद्युत संभावना भनिन्छ । केही साना तिना योजना त बनेका छन्, तर अन्तर्राष्टिय स्तर को आयोजना अहिलेसम्म छैन् । भारतले यो श्रोतलाई आफ्नो जनताको लागि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । नेपालको अर्को ध्यान नदिएको श्रोत पहाडमा बस्ने साना किसानहरुको आत्मसम्मानको भावना हो, जो कहिल्यै बिदेशी शक्तिसंग निहुरिनु परेन भनेर गर्व गर्छन् । मुलधार को विकास प्रक्रियाबाट टाढा रहेपनि उनीहरु वास्तवमा गरीब होईनन् । बरु, बिकासको फल चाखेर सम्पन्न भएकाहरु नै आफु गरीव भएको गुनासो गर्छन् ।
स्थानीय स्तरमा अनुदानमा चलेका केही संस्थाहरुले राम्रा काम पनि गरेका छन् । केही साच्चै नै आशलाग्दा पनि छन् । तर थोरै सफलताबाट प्रभावित भएर ठुला शक्तिहरुको चलखेल नजरअंदाज गर्न मिल्दैन् । वास्तवमा विकास प्रक्रियाले झनै बढी दरिद्रता सिकाएको छ ।
* डा. स्टिफेन बेज्रोछ्का को नेपाल गाइड बाट
Labels: Corruption in Nepal, Enviromenal and Vehicular Pollution in Kathmandu Nepal, Media Trends in Nepal, Nepal Development Process, Nepal Politics, Political and Social Corruption in Nepal
अहिंसाको मामलामा जस्तै राष्टियताको मामलामा पनि नेपालीहरु पाखण्डी छन् । जो जति धेरै पढेलेखेको र सम्पन्न छन् उनेरु तेति नै धेरै पाखण्डी छन् । अचेल जातियता, क्षेत्रीयता र भारत केन्द्रित राष्टिय स्वाधीनताको चर्चा धेरै चलेको बेला मैले पनि केही सामान्यीकरण वा जेनरलाईजेशन गरेको छु ।
शहरीया र शिक्षित र राजनीतिक बाहुन छेत्रीहरु को लागि राष्टियता महत्वपुर्ण छैन् । छेत्रीहरुमा परम्परागत रुपले शासकिय स्वरुपको कारणले अलिकता छ, बाहुनहरुमा त छँदै छैन् । राष्टियता समुहवादी धारणा हो । बाहुनहरु ऐतिहासिक रुपले नै अध्ययन, भाग्यवादी र व्यक्तिगत मोक्षमार्गी हुनेभएको उनीहरुमा समुहवादी भावना कम हुन्छ । तेसैले बाहुनहरु मुलत राष्टवादी हुदैनन् । उनेरुलाई यस लोक भन्दा पनि पर लोक को चिन्ता हुन्छ । उनेरुको संसारलाई परम्परागत रुपले दुई भागमा बाडछन् शुद्ध अशुद्ध, शुचि अशुचि, अपवित्र पवित्र, चोखो जुठो आदि । उनेरुको प्रयास सकेसम्म चोखो, पवित्र शुद्ध हुनु देखिनु हुन्छ । बर्तुन गर्नासाथ बाहुनको पहिलो मन्त्र हुन्छ अपवित्रो पवित्रोवा आदि अदि । तेसैले परम्परागत व्याख्या अनुसार बाहुन भन्न लायक अचेल कोही पनि नरहेको भएपनि हरेक कुरामा उनेरु आफुलाई अरु भन्दा पवित्र र शुद्ध देखाउने चेष्टा गर्छन् । तेसैले एक अर्थमा बाहुनहरु सबैभन्दा शुद्ध नस्लवादी वा रेसिस्ट पनि हुन्छन् । धेरै शुद्धतावादी को ढोंग गर्नपर्ने भएकोले धेरैजसो पाखण्ड बाहुनहरुमा नै हुन्छ । तेसैले सबैभन्दा शुद्ध प्रजातन्त्रवादी पनि बाहुन नै हुन्छन्, शुद्ध कमुनिष्टको दावा पनि बाहुनकै हुन्छ । छोटकरीमा भन्दा राजनीति गर्ने धेरै जसो बाहुन छेत्रीहरु अवसरवादी र भ्रष्ट चरित्रका छन् । तर कतिपय बाहुनहरु असल र उत्कृष्ट पनि हुन्छन् जस्तो कि म ।
जनजातिहरुमा सामुहिक भावना बढी हुने भएकोले सर्सती हेर्दा उनेरु बढी राष्टवादी देखिन्छन् । तर राष्टियता को मामला जनजातिहरु बीच नै धेरै फरकहरु पनि छन् । कतिपय जनजातिले आफुलाई नेपालको आदिवासी र लडाकु भनेपनि नेपालको सुरक्षा भन्दा पनि जनजातिहरु अरु देशको सुरक्षाको लागि प्रसिद्ध छन् । ब्रिटीश र खासगरी भारतीय राष्टिय सेनामा जागीर खान मरिहत्ते र गर्व गर्ने जनजातिहरु कसरी नेपाली राष्टवादी हुन सक्छन् ? तेसो त अचेल म भारतसंग आईपरे लडनुपर्छ भन्ने सामान्य जनतामा धेरैजसो जनजातिहरुलाई नै देख्छु । भारतले सिमाना मिच्यो भारतसंग लडनुपर्छ भनेर जनजातिका सदस्यहरुले भनिरहँदा उनेरुको भावभंगिमा देखेर अचम्म लाग्छ उनेरुले साच्चै नै पुरा विश्वास का साथ भनिरहेका हुन्छन् । नेताहरुले जस्तो कोरा राजनीति मात्र भनिरहेका हँुदैनन् । मलाई के निश्चित लाग्छ भने नेपाल भन्ने राष्ट रह्यो भने त्यो जनजातिकै जुझारुपनाले मात्रै रहन्छ । तर जबसम्म नेपाली जनजातिका सदस्यहरुले भारतीय सुरक्षा नीति अनुसार भारतीय सेनामा जागिर खान्छन् तबसम्म नेपाल कमजोर नै रहनेछ ।
क्षेत्रीय पहाडी मधेशीहरु
बहुसंख्यक मधेशीहरु सिद्धान्तत बाहुन जस्तै नेपाली राष्टवादी छैनन् । सबैमा अपवाद भए जस्तै मधेशी राजनीतिक नेताहरुमा रामवरण र मातृका यादव पनि अपवाद नै होलान् । राष्टिय राजनीतिमा हिजोअस्ति सम्म बाहुनवाद हावी भए जस्तै मधेशी राजनीतिमा आजसम्म पनि उच्च हिन्दु जातिवाद नै हावी छ । जहाँसम्म जनताको कुरा छ, अहिलेसम्म मधेशी जनता भन्दा पनि पहाडिया जनताहरु नै भारत र भारतीय रोजगारमा निर्भर छन् । विगतमा यो कुरा नबुझेका वा बुझ पचाएका ढोगी पहाडी राष्टवादले मधेशी जनतालाई राष्टिय मुलप्रवाहमा स्वीकार गरेन । परिणामस्वरुप भारतले अवसरवादी नेताहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालको जनसाख्यिक अतिक्रमण गर्न सफल भयो । अहिलेका धेरैजसो मधेसी शसस्त्र दलहरु मधेशी आत्मसम्मानको लागि भन्दा पनि नेपालको राष्टिय सुरक्षा कमजोर पार्ने उदेश्यले भारतको आडमा संचालित आतंकवादी संगठन हुन् । अहिले त उच्च शिक्षित बहुसंख्यक संभ्रान्त मधेशीहरु पनि नेपालमा भन्दा पनि भारतीय मुलप्रवाहमा मिसिन पाउँदा नै खुशी हुनेछन् ।
सारांश नेपालीहरु नै राष्टवादी छैनन भने भुत्रो हुन्छ नेपाल को राष्टिय स्वाधीनता ?
Labels: Nepal Ethnic Conflicts, Nepal Human Rights, Political and Social Corruption in Nepal
म फेरि पनि भन्छु, यहाँ एउटा उचाल्ने कोशिश के हुन्छ भने मदेशमा पहाडी र मधेशीको झगडा गराइदिने । म पहाडिया रे । मेरो परिवार ७२ वर्ष भयो विराटनगरमा बसेको । विराटनगरको स्थापना मेरो पिताजीले गरेको हो । त्यहाँको मन्दिर मेरो पिताजीले बनाउनु भएको हो । म त्यहाँको, विराटनगरको प्रवक्ता हुन सक्दिन रे । दशवर्ष अघि पूर्णियाबाट आएको हिन्दुस्तानीले नागरिकता लियो, त्यो त्यहाँको प्रवक्ता हुन पाउँछ रे । म हुन पाउँदिन । त्यस्तो प्रचार यहाँ चलिरहेको छ पर्वते र मदिसे भनेर ।
अहिले तराईको उपेक्षा भयो भन्नेहरु यता दश बीस वर्षमा नागरिक भएर आएका छन्, तिनीहरुले उठाएको प्रश्न हो । तराईमा ट्याक्टर जीप र कहीं कहीं त हात्ती नभएको कुनै गाउँ छैन, तर पहाडमा त्यस क्षमताको लखपति भन्ने मानिस शायद विरलै होलान् । तराईमा भोकभोकै कुनै मानिसले बस्नुपरेको छैन, पहाडमा कुनै मान्छेले लाहुर गएनन् भने भोकभोकै बस्नुपर्छ ।
तर, तराईभित्र मैले एउटा अर्को कुरा देखें। त्यो म पर्वतेहरुलाई भन्न खोजिरहेको छु । त्यहाँ यत्रो ठुलो राष्ट्रियताको भावना छ मलाई व्यक्तिगत अनुभव पनि छ, र मैले आफ्नो अध्ययन् पनि गरेको छु । तपाई कुनै मदिसेलाई बाहिर गएर जागिर खाएर उतै घरजम गरेर बसेको देख्नुभएको छ ? म हजारवटा पर्वतेलाई देखाइदिन सक्दछु । त्यस्तो कोशिश गरिरहेको छ कि म ग्रीनकार्ड पाऊँ र अमेरिकामा गएर बसौं भनेर ।
एउटा तराईवासी मधेशीको मसंग भेट पर्यो न्युयोर्क हस्पीटलमा । मैले तपाईं को हो भन्दा वल्र्ड बैंक मा काम गर्छु भन्यो । त्यहाँ धेरै छन् नेपालका ऊ भन्दा धेरै कमाउने । डाक्टरहरु छन् । उनीहरुले मलाई मद्दत गरेका छन् । तर एकमुष्ट उसले दशहजारको चेक दियो, त्यति त के, हजारको चेक पनि कसैले दिएको छैन ।
मैले उसलाई भने, यो दशहजार डलरको चेक ? तिमीसंग कति रुपैयाँ छ ? उसले भन्यो दशहजार तीनसय डलर मसंग छ । उसले सातवर्षमा कमाएर बचाएको सबै रकम मलाई दियो । मैले यति चाहिदैन पछि लिउला भन्दा उसले भन्यो तपाईंको काममा मेरो रुपैया काम लागेन भने मेरो रुपैयाको के मूल्य ?
त्यो मान्छे वर्खामा यहाँ नेपाल आएको थियो । आएर मलाई के भन्यो भने मलाई जहिले पनि २४ घण्टा गाउँको सम्झना आउँछ । मलाई भैसीको सम्झना आउँछ, भैसीमा चढेको सम्झना आउँछ, गुल्ली डण्डा खेलेको सम्झना आउँछ, पोखरी मा नुहाएको सम्झना आउँछ । म राति सुत्दा सपना देख्छु । दिउँसोमा पनि त्यै सम्झन्छु ।
त्यसो हुनाले म गाउँ नगई भएन भनेर म ऐले गाउँ आएँ । वर्खा थियो । वर्खामा जान बाटो थिएन । म यै सुट लगाएर हेलेरै पुगें तिन माइल । मैले त्यहाँ केही गर्न सकेको छैन् । मैले मनमा सोचें, कति राष्ट्रियताको भावना छ यो मान्छेमा । तपाईहरु मध्ये कतिले भन्न सक्नुहुन्छ उसले भनेको जति ?
अब नेवारहरुको कुरा गरौं । तपाईले नेवार देखाउनुस्, जो दौडादौड गरेर बाहिर बस्न खोज्छ, काठमाण्डौ छोडेर । छन् कोई ? विदेशमा पैसा कमाए पनि यही बिहा गर्न आउँछन्, त्यै गलि फोहोर मैला भएको ठाउँमा नै घर किन्छन्, यहीं बस्छन् । एउटा यत्रो ममता छ आफ्नो देशका प्रति उनीहरुमा । उनीहरुको कला र इतिहासले नै बाहिरियालाई नेपाल चिनाउँछ ।
वास्तविकता के छ भने राष्ट्रियताको एउटा व्यापक आधार यस देशमा कायम छ । हामीहरुको कोशिश के हुनुपर्दछ भने यत्रो ठुलो राष्ट्रियताको संचिति छ, त्यो संचितिलाई हामी समातौं, त्यहासम्म हामी पुगौं । बाहिरबाट हामीहरुलाई धमिल्याउने जुन कोशिश भइरहेको छ, बिदेशी प्रभावबाट, त्यसबाट हामी बच्ने कोशिश गरौं । राष्ट्रियताको यत्रो धरातल छ, यत्रो ठुलो आधार छ राष्ट्रियताको त्यसबारे कसैले बोल्दैन् ।
यहाँ केवल झुठा कुराहरु मात्रै फैलाइन्छन् । त्यसो हुनाले, मैले भने नि, तपाई मलाई एउटा राष्ट्रवादी अखबार देखाउनुस्, म च्यालेन्ज गर्दछु तपाईंलाई र तपाई मलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ भने म प्रत्येक अखबारको पृष्ठभुमि बताउँछु र कुन विदेशीबाट सन्चालित कुन अखबार म भनिदिन्छु ।
(साभार राष्ट्रियताको आधार वि पी कोईराला सन् १९८१ (आशिंक संकलन्)
Labels: Bahunbad in Nepal, Corruption in Nepal, Media Trends in Nepal, Nepal Politics, Political and Social Corruption in Nepal